Wp/blk/တွိုက် - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > တွိုက်
တွိုက် (အိဉ်ႏကလေက်:Continent)နဝ်ꩻ ထွားအီတောမ်ႏ ကမ္ဘာႏဟံႏခိုႏ အပွိုင်အပုင်ႏအလꩻ တောမ်ႏ လိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏ အုံအဝ်ႏဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏရေꩻတဲင် ဖဖြယ်လွေꩻ ဟံႏယာႏတန် အကွို့ꩻကွို့ꩻအခဝ်ခဝ်ထွူ ဟံႏနယ်ႏအကူအနားကအဝ်ႏဒါႏ ဟံႏယာႏတန်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဖန်လွေꩻ တွိုက်သွူ။ ဟံႏပထဝီႏဘာႏသာႏကိုတဲ့ ဗွောင်ခါꩻတွိုက်အဓိပ္ပာယ်ႏနဝ်ꩻ တန်လုဲင်းဒါႏဟံႏယာႏခင်တန်အဝ်ႏဗာႏ၊ ဟံႏဗီႏခင်တန် တဗာႏတောမ်ႏတဗာႏခါႏနဝ်ꩻ ထီခိုႏ(ပင်ႏလယ်ႏသမုဒ္ဒရာႏ)ဖုံႏ အဝ်ႏရဲးခါꩻဒါႏအခါႏနဝ်ꩻ ဖန်ဟဲ့ꩻ ဟံႏယာႏခင်တန် "တွိုက်"နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းယို ဝင်ꩻဖဖြယ်ခါꩻတွိုက်တန်ဖုံႏ အဝ်ႏ(၇)တွိုက်သွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ (အဝ်ႏအတန် စဲဉ်ႏလင်ꩻအပေႏ) အာသျတွိုက်၊ အာဖရိကတွိုက်၊ အမေႏရိကတွိုက်ထင်ꩻ၊ အမေႏရိကတွိုက်နဝ်၊ အာတန်တိကတွိုက်၊ ဥရောပတွိုက် တောမ်ႏ သြသတေးလျတွိုက် ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ။ "လိုꩻဖိုင်ႏကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေခါꩻ တွိုက်တန်ဖိုင်ႏ အဝ်ႏ(၇)တွိုက်လဲ့ ယလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ အာသျတွိုက် တောမ်ႏ ဥရောပတွိုက်ယို ခြွဉ်းငီꩻသွူဝင်ꩻတဲင် ဟဲ့ꩻဖန်လွေꩻညီꩻ Wp/blk/ယူရေးသျားတဗာႏချင်ႏ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။"
အွောန်ႏနယ် တွိုက်တန်ဖိုင်ႏ ဟံႏပုင်ႏ
ပွိုးတောမ်ႏ တွိုက်ဆေ့ꩻအာ အဗာႏခြွဉ်းနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏဒေႏသအလွောက် အဝ်ႏအွောန်ႏထွော့ ဟဲ့ꩻဖန်ရောင်ဒျာႏ အစွိုးစွိုး နုဲင်းလ့နဝ်ꩻသွူ။
တွိုက်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အွောန်ႏနယ်ခါꩻဖေႏတောမ်ႏ အရောင်ႏအစွိုးစွိုးနဝ်ꩻသွူ။
တွိုက်တန် ၄ ဖြုံႏ
တွိုက်တန် ၅ ဖြုံႏ
တွိုက်တန် ၆ တွိုက်
တွိုက်တန် ၆ ဖြုံႏ
တွိုက်တန် ၇ ဖြုံႏ
ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်းတောမ်ႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းEdit
ဧရိယာႏ (တာ စတုရန်းကီလိုမီတာနဝ်ꩻ သန်း ၁၀ အနေႏ) တောမ်ႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (တာဗီလီယံ အနေႏ) အွောန်ႏနယ်ခေးခါꩻဝင်ꩻပုင်ႏ
ဇယားလ့ယိုနဝ်ꩻ အွောန်ႏနယ်ခေးခါꩻဖေႏဒျာႏ တွိုက်တန်တဗာႏစီႏ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏတောမ်ႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းဒျာႏသွူ။ (အဝ်ႏဧရိယာႏအအာ စဲဉ်ႏလွေꩻ အဆေ့ꩻထျꩻသွူ။)
၄၃,၈၂၀,၀၀၀ ၁၆,၉၂၀,၀၀၀ ၂၉.၅% ၄,၁၆၄,၂၅၂,၀၀၀ ၆၀% ၉၅.၀ ၂၄၆ ဝေင်ꩻသျန်ဟုဲင်း၊ ခယ်ႏခမ်းထီ
၃၀,၃၇၀,၀၀၀ ၁၁,၇၃၀,၀၀၀ ၂၀.၄% ၁,၀၂၂,၂၃၄,၀၀၀ ၁၅% ၃၃.၇ ၈၇ ဝေင်ꩻလာဂို့၊ နုဲင်စီးရီးယားခမ်းထီ
၂၄,၄၉၀,၀၀၀ ၉,၄၆၀,၀၀၀ ၁၆.၅% ၅၄၂,၀၅၆,၀၀၀ ၈% ၂၂.၁ ၅၇ ဝေင်ꩻမဲက်သီကိုသီးတီး၊ မဲက်သီကိုခမ်းထီ
၁၇,၈၄၀,၀၀၀ ၆,၈၉၀,၀၀၀ ၁၂.၀% ၃၉၂,၅၅၅,၀၀၀ ၆% ၂၂.၀ ၅၇ ဝေင်ꩻသော်ပေါ်လို၊ ဗရာသီးခမ်းထီ
၁၃,၇၂၀,၀၀၀ ၅,၃၀၀,၀၀၀ ၉.၂% ၄,၄၉၀ ၀% ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၇၈ McMurdo Station၊ Wp/blk/အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ
၁၀,၁၈၀,၀၀၀ ၃,၉၃၀,၀၀၀ ၆.၈% ၇၃၈,၁၉၉,၀၀၀ ၁၁% ၇၂.၅ ၁၈၈ ဝေင်ꩻမော်သကို၊ ရသျားခမ်းထီ
၉,၀၀၈,၅၀၀ ၃,၄၇၈,၂၀၀ ၅.၉% ၂၉,၁၂၇,၀၀၀ ၀.၄% ၃.၂ ၈.၃ ဝေင်ꩻသစ်ဒနီ၊ ဩသတေးလျခမ်းထီ
တွိုက်ကားကအဝ်ႏ ဟံႏယာႏဧရိယာႏခြွောန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၁၄၈,၆၄၇,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၅၇,၃၉၃,၀၀၀ စတုရန်းမဲင်ႏ) တဲင်၊ အဝ်ႏတတွာလွေꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏခိုႏမဲ့ငါလို့လို့ (၅၁၀,၀၆၅,၆၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ တဝ်းလဲ့ ၁၉၆,၉၃၇,၄၀၀ စတုရန်းမဲင်ႏ) ၂၉.၁% နဝ်ꩻသွူ။
တွိုက်ကားကအဝ်ႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအရမ်ꩻအကျမ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၇,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ဖြာꩻသွူ။
↑ 1.0 1.1 Continents: What isaContinent?။ National Geographic။ 29 June 2009 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 10 January 2015 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။ Cite error: Invalid <ref> tag; name "NatlGeo" defined multiple times with different content
↑ R. W. McColl, ed. (2005, Golson Books Ltd.)။ 'continents' – Encyclopedia of World Geography, Volume 1။ p. 215။ ISBN 978-0-8160-7229-3။ 2012-06-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်တို့သည် စူးအက်ကျွန်းဆွယ်ဖြင့် ထိစပ်ဆက်သွယ်နေသောကြောင့် ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်တို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ အာဖရို-ယူရေးရှား သို့ ယူရာဖရေးရှား ဟု တစ်ပေါင်းတည်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ |year= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ 3.0 3.1 2001. New York: Columbia University Press – Bartleby.
↑  Older/previous official Greek Paedagogical Institute 6th grade Geography textbook (at the [[|Wayback Machine]]), 5+1 continents combined-America model; Pankosmios Enyklopaidikos Atlas, CIL Hellas Publications, ISBN 84-407-0470-4, page 30, 5+1 combined-America continents model; Neos Eikonographemenos Geographikos Atlas, Siola-Alexiou,6continents combined-America model; Lexico tes Hellenikes Glossas, Papyros Publications, ISBN 978-960-6715-47-1, lemma continent (epeiros),5continents model; Lexico Triantaphyllide online dictionary , Greek Language Center (Kentro Hellenikes Glossas), lemma continent (epeiros),6continents combined-America model; Lexico tes Neas Hellenikes Glossas, [[|Georgios Babiniotis|G.Babiniotes]], Kentro Lexikologias (Legicology Center) LTD Publications , ISBN 960-86190-1-7, lemma continent (epeiros),6continents combined-America model.
↑ Non-permanent, varies. See also: Wp/blk/Demographics of Antarctica. Antarctica Archived 25 December 2018 at the Wayback Machine.. CIA World Factbook. March 2011 data. Retrieved December 24, 2011.
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/တွိုက်&oldid=5419189"
Last edited on 30 April 2022, at 11:54